इस्टोनियाको पोस्टमा जर्मनीको ८ गोल ! | Hamro Khelkud
इस्टोनियाको पोस्टमा जर्मनीको ८ गोल !
एजेन्सी – युरोकप छनोटमा जर्मनीले प्रभावशाली जित निकालेको छ । मंगलबार राति भएको खेलमा जर्मनीले इस्टोनियालाई ८–० को भारी अन्तरले पराजित गरेको हो ।
घरेलु मैदानमा भएको खेलमा जर्मनीको प्रभावशाली जितमा मार्काे रिउस र सर्जी जिनाब्रीले समान २ गोल गरे । लियोन गोरेट्का, इकेए गुन्डोगान, टिमो वेर्नर र लिरोए साने समान १ गोल गरे ।
गोलको वर्षा भएको खेलमा जर्मनीले पहिलो हाफमै ५–० को आरामदायी अग्रता बनाउदा दोस्रो हाफमा ३ गोल थपेको थियो ।
खेलको १०औं मिनेटमा रिउसले थिलो केरहरको पासमा गोल गर्दै टोलीलाई अग्रता दिलाएका थिए । १७औं मिनेटमा लिरोए सानेको पासमा सर्जी जिनाब्रीले गोल गरे । २०औं मिनेटमा जोसुवा किम्मिचको पासमा लियोन गोरेट्काले गोल गर्दा जर्मनी ३–० ले अघि बढेको थियो ।
२६औं मिनेटमा इकेए गुन्डोगानले पेनाल्टीमा गोल गर्दा जर्मनी पहिलो हाफमै सहज जिततर्फ अग्रसर बनेको थियो । ३७औं मिनेटमा मार्काे रिउसले व्यक्तिगत दोस्रो गोल गरेपछि जर्मनीले पहिलो हाफमा ५–० को अग्रता लिन सफल भयो ।
६२औं मिनेटमा सर्जी जिनाब्रीले व्यक्तिगत दोस्रो गोल गरे । ७९औं मिनेटमा टिमो वेर्नरले गोल गरेपछि जर्मनी ७–० ले अघि बढ्यो । ८८औं मिनेटमा लिरोए सानेले गोल गरेपछि जर्मनीले ८–० को प्रभावशाली जित हात पा¥यो । खेलभर नै जर्मनीले इस्टोनियालाई दवावमा राखेको थियो ।
प्रभावशाली जितसँगै जर्मनीले समूह ‘सी’ मा ३ खेलबाट ९ अंक जोडेर दोस्रो स्थानमा यथावत रहेको छ ।
यही समूहको अर्काे खेलमा नर्दन आयरल्यान्डले बेलारुसलाई १–० ले पराजित गर्दै शीर्षस्थानमा रहिरहन सफल भयो । अपराजित रहेको आयारल्यान्डको ४ खेलबाट १२ अंक जोडेको छ । नेदरल्यान्डको ३ अंक रहँदा बेलारुस र इस्टोनियाले अंक जोड्न सकेको छैन ।